तिनीहरूका हातहरूसँग उत्सव कपालहरू
यदि निकट भविष्यमा यो पार्टी वा एक सेलिब्रिटी कार्यक्रम जान आवश्यक छ भने, त्यसो गर्नु अघि यो केवल पोशाक, मेकअप, तर पनि कपाल मात्र सोच्न आवश्यक छ। सुन्दर र स्वच्छता राखिएको कपाल तपाईंलाई अयोग्य बनाउनेछ।
कसरी छुट्टीको कपाल बनाउने?
कुनै पनि कपाल - छोटो, लामो वा घुम्न, मूल तरिकामा डिजाइन गर्न सकिन्छ। स्क्वायरमा त्यस्ता उत्सवको क्यान्सर बनाउन सजिलो छ। रोमान्टिक, रहस्यमय छवि सिर्जना गर्न, मध्यम curlers मा हावा गीला कपाल। तिनीहरूले सुत्न पछि, कर्लरहरू हटाउनुहोस्, तपाईंको कपालमा रङको लागि स्टाइल र मोडेलको लागि मोम लाग्नुहोस्।
लामो कपालको लागि केश
आफ्नै हातको साथ साधारण त्यस्ता उत्सव कपाल र लामो कपालको मालिक बनाउन सक्छ। यो क्लासिक लगभग हरेकको लागि उपयुक्त छ र सँधै उपयुक्त देखिन्छ।
उच्च ponytail मा कपाल संकलन, लोचदार बैंड संग छिटो।
ढोकाको आधार वरिपरि कपाल घुम्नुहोस्।
स्टडको साथ परिणामी बन्डल पाउनुहोस्, कपाल र कपालको कपाल, रिबन वा रूमाल।
कपाल कपालको लागि केश
यदि तपाईं थाहा छैन कि कसरी घुमेको कपालमा उत्सव कपाल बनाउने, त्यसपछि निम्न टिप प्रयोग गर्नुहोस्:
क्रान्तिमा बालबालिकाहरू वा केशपिनहरूसँग सापेक्ष पारस्परिक तालाहरू।
नि: शुल्क तालहरूमा कम तालाहरू छोड्नुहोस्।
तपाईंको केश को मध्य-लाक वार्निश वा स्पार्कल्स संग वार्निश संग छिराउनुहोस्।
हाल, पसलहरूमा ठूलो संख्यामा विभिन्न बाल सामानहरू बेच्ने गरिन्छ जुन घरमा असामान्य अवकाश बालस्वास्थ्य सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईलाई आवश्यक छ एक कल्पना र थोडा समय। नबिर्सनुहोस् कि तपाईंले उत्सवको दिनमा आफ्नो कपाल धोईदिनु हुँदैन, अन्यथा कपाल अनौपचारिक हुनेछ र यो तपाईं तिनीहरूलाई रोटी गर्न कठिन हुनेछ।
तर यदि तपाईंले आफ्नो कपाल गर्न को लागी व्यवस्थित गर्नुभएन - चिन्ता नगर्नुहोस्: केवल आफ्नो कपाल धोएं, यसलाई हेयर कपाल संग सुखाएर यसलाई तपाइँको औंलाहरु राख्नुहोस्। सफा, स्वस्थ, चमकदार कपाल कुनै पनि महिलाको लागि उत्तम सजावट हो!
इटालियन कपाल एक्सटेन्सन - एक अद्वितीय प्रक्रिया को सबै नग्नताहरु
गीला कपालको प्रभाव कसरी बनाउने?
उच्च माथेको लागि कपाल पसलहरू
ब्राजिलियन कपाल हटाउने
पछाडिको पछाडीको कपाल
कसरी हेयर कपाल बिना छिटो कपाल बाल्ने -3सरल तरिका
अंतरंग क्षेत्रहरूको डिप्लुलेटका लागि क्रीम
गाढा कपाल ल्याइदिन्छ
रातो कपालको छाला
कसरी आफ्नो बान्लाई आफुलाई काटेर?
किशोरहरुको लागि स्कूल को लागि हेयर स्टाइल
कसरी घरमा कपाल कडा र बलियो बनाउनुहुन्छ?
हानिको साथ वजन घटाने को लागि दालचीनी
ग्रुप - नुस्खा
रोमान्टिक डिनर कसरी व्यवस्थित गर्ने?
लिन्डसे लोहान इस्लाम को गोद लेने को बारे मा अफवाहहरु लाई गरम: अभिनेत्री हिजाब पहनता छ
बालकनी को लागि बोर्डिंग
मिडिया: पूर्व पति जेनेट जैक्सनले दोस्रो मौका चाहन्छन्!
विद्युत हीटिंग ऊर्जा बचत बयलर
हिप संयुक्त रूपमा दुख्ने बेलामा दुखाइ
सुत्सुइली संग बगाई
Otrywedni lichen - घर मा उपचार
बच्चालाई चम्मच खाने कसरी सिकाउनुहुन्छ?
सडकमा केटीहरूको स्प्रिंग फोटो शूट
त्यसोभए उनीहरु सबैको मन पराउँछन्।
बच्चाहरूको लागि नयाँ वर्षको उपहार
फोटो शूटको लागि वसन्त छवि